Sidee loogala soo baxaa galka Soo degsashada Dock-ka haddii aan tirtirnay | Waxaan ka socdaa mac
Sidee loogala soo baxaa galka Soo degsashada Dock-ka haddii aan tirtirnay
Markaad ka soo dejineyso feyl kasta internetka, dhammaan waxyaabaha jira waae waxaa si toos ah loogu keydiyey galka Soo degsashada, galka aan si toos ah uga heli karno Dock-ka, maadaama uu ku ag yaallo qashinka dib loo warshadeeyo. Maaddaama aad had iyo jeer haysato galka marwalba gacantaada, uma baahnid biraawsar adiga oo adeegsanaya Raadiyaha raadinaya faylasha la soo dejiyey ama arag sida tartiib tartiib ah miisaskayagu u buuxinayo faylasha, xaaladaha intooda badan waxtar lahayn. Laakiin ka warran haddii galka soo degsashada si qalad ah loo tirtiro? Iyada oo loo marayo Helitaanka waxaan ku heli karnaa, laakiin waxay horeyba nooga baahan tahay inaan sameyno wax ka badan hal talaabo si aan u lumino deg-degga.
Nasiib wanaagse, dhibaatadan yar waxay leedahay xal aad u fudud. Xalkani wuxuu la mid yahay kan aan u isticmaali karno inaan ku dhigno Dock galka wax kasta oo aan dooneyno inaan marwalba gacanta ku hayno oo aan joojino furitaanka Raadiyaha faraxsan ee had iyo jeer gala isla galkaas. Si aad dib ugu dhigto galka Soo degsashada Dock-ka, waa inaan u soconaa sida soo socota.
Ku soo celi galka Soo degsashada Dock-ka
Marka hore waxaan fureynaa Finder
Kadib waxaad aadeysaa menu-ka kore waxaadna gujineysaa menu-ka Ir. Kadib guji ikhtiyaarka Inicio.
Raadiyaha ayaa na tusi doona dhammaan faylalka nidaamka ee loo qoondeeyay adeegsadeheena. Si aan markale u tusno galka Soo degsashada, waa inaan sdooro oo u jiido Dock-ka, gaar ahaan aaggii ay markii hore ahayd.
Marka aan hawlgalkan qaadno, waan arki doonaa sida ay tahay galka Downloads-ku wuu soo muuqanayaa meesha asalka ah.
macOS nooma ogola in aan ka helno galka ku jira Codsiyada Dock, Sidaa darteed, labadaba faylasha la soo dejisto iyo fayl kale oo kasta oo aan dooneyno inaan ku darno Dock, waa inay ku yaalliin dhinaceeda midig, oo ka hooseysa qadka toosan ee ku xiga arjiga ugu dambeeya ee la muujiyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sidee loogala soo baxaa galka Soo degsashada Dock-ka haddii aan tirtirnay
13 faallooyin, ka tag taada
aad ayuu u fiicanyahay .. khaladka ayaan ku tirtiray galka waxaanan moodayay in macluumaadka iga lumay .. dib ayaan u soo ceshay aniga oo raacaya waxa qoraalka ku qoran aad ayaad u mahadsantahay
Waxaan qaadayaa talaabooyinkan galka ayaa markale ka soo muuqanaya qashinka. Dhibaatadu waxay tahay kahor intaanan si kadis ah u tirtirin, galka dajinta dekedda waxay soo bandhigtay liis kor loogu qaadayo kuwii ugu dambeeyay oo hadda daaqad ayaa laga furayaa dhammaan soo degsashada iyadoo aan loo kala horreeyn mana awoodo inaan ku laabto galka asalka ah ee gobolka. Ma jiraa qof garanaya sida loo beddelo galka ku yaal barta 'Mac's deck' si dib loogu qoro soo degsooyinkii dhowaa? Mahadsanid
Camila Andrea dijo
Waxaan jeclaan lahaa in hadii ay jawaab kaa siiyeen aad ila wadaagi karto maxaa yeelay isku dhibaato ayaan qabaa ... pls
Ku jawaab camila andrea
Astaamaha la dul dhigay dekedda iyo meesha ay ka soo muuqanayso, ka xulo ikhtiyaarka "Fan" hoosta "U fiirso waxyaabaha ku jira". Salaan.
Anigu ma tirtirin galka, ma xasuusto gabi ahaanba. Waxaan si fudud uga lumay dekedda. Macluumaadkaaga, waan ku helay oo waxaan dhigay meeshii ay markii hore ahayd. Aad ayaad u mahadsantahay.
Pablo QM dijo
Aad ayaad u mahadsantahay! Si kadis ah ayaan u tirtiray iminkana sharaxaaddaadii ayaan ku guuleystey inaan mar kale helo astaanta soo dejinta ee Dock-ka!
Jawaab Pablo QM
aad ayaad u mahadsantahay! Kaliya waxaan ku sameeyay Catalina dhib la'aan ... Abriil 2020
Waxaan ku darrayaa faallooyinkeyga dhowr usbuuc ka hor… Dhibaato ayaan qabaa… immika faylku waxay u kala horreeyaan alifbeeto ahaan mana aha taariikh ahaan… iyagu sidaas uma shaqeeyaan? Sideen dib ugu habayn ku sameeyaa iyaga?
Si khalad ah ayaan u tirtiray galka oo dib ayaan ugu celiyey Dock-ka, laakiin ma awoodo inaan dib u taageero, sidaas darteedna macquul maaha in wax la helo. Ma i caawin kartaa? mahadsanid
Qolka Ignatius dijo
Dusha jiirka dusha galka soo dejinta oo riix batoonka midig ee midig. Halkaas ayaa lagu muujiyaa xulashooyinka kala duwan ee muujinta oo aad dooran kartaa habka Fan.
Tilmaam aad u fiican, horay ayaan u sameeyay oo faylka soo dejinta ayaa ka muuqday Dock
ernesto alonso garcia guursaday dijo
mahadsanid caawimaad fiican
Ku jawaab ernesto alonso garcia casado
Mahadsanid, talo aad u fiican
Ku jawaab paco
Adobe wuxuu soo bandhigayaa mashruuca Scribbler si uu u midabeeyo sawirro madow iyo caddaan ah mahadnaqa AI
Beat The Game, ayaa maanta yimid Mac App Store